ဓမ္မတာမှန်ဖို့အတွက် အမျိုးသမီးတိုင်း မဖြစ်မနေ သိထားသင့်တဲ့အချက် (၅) ချက်… – Media Sharing
ဓမ္မတာမှန်ဖို့အတွက် အမျိုးသမီးတိုင်း မဖြစ်မနေ သိထားသင့်တဲ့အချက် (၅) ချက်…
admin | June 12, 2020 | Health | No Comments
ဓမ္မတာဖြစ်စဉ်ဆိုတာ အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးအတွက် အရေးကြီးဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဓမ္မတာမမှန်ခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေပြီး ရေရှည်မှာရောဂါကြီးကြီးမားမားတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ၂၈ ရက်တစ်ကြိမ်ဓမ္မတာလာခြင်းက ပုံမှန်ဖြစ်ပြီး ဒီရက်အတောအတွင်းမှာမလာဘူးဆိုရင်တော့ ဒါဟာ ဓမ္မတာမမှန်ဘူးလို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးအတွက် အရေးကြီးတဲ့ ဓမ္မတာပုံမှန်ဖို့အတွက် ဒီအချက်လေးတွေကို အမြဲ သတိထားပေးပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်နော် …။
ကိုယ်အလေးချိန်နည်းလွန်းခြင်း၊ များလွန်းခြင်းက ဟော်မုန်းတွေကိုကမောက်ကမဖြစ်စေခြင်းကြောင့် ဓမ္မတာမမှန်တာကို ဖြစ်စေပါတယ်။ဒါကြောင့် ကိုယ့်အရပ်နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ရှိအောင် အမြဲထိန်းသိမ်းထားသင့်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေ လှဖို့ထက် ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းသင့်ပါတယ် …။
စိတ်ဖိစီးမှုများကြောင့်လည်း ဓမ္မတာကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ဟော်မုန်းတွေကိုထွက်စေတာကြောင့် ဓမ္မတာမှန်ဖို့အတွက် စိတ်ဖိစီးမှုနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်နေသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်စိတ်ရှုပ်ထွေးမယ့်အရာတွေ တတ်နိုင်သလောက်မတွေးဘဲနေပါ၊ အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ပါ။ တရား ထိုင်ပေးပါ …။
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးတာက ခန္ဓာကိုယ်သွေးလှည့်ပတ်မှုကောင်းမွန်စေပြီး အကျိုးပြုဟော်မုန်းတွေကို ထွက်စေပြီး ဓမ္မတာမှန်အောင်လည်း ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမျိုးသမီးတွေ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေကို အမြဲပုံမှန် လုပ်ပေးသင့်ပါတယ် …။
ဓမ္မတာလာမယ့်ရက်ကို တွက်ချက်ထားပြီး ရက်နီးလာတဲ့အခါ ဝမ်းဗိုက်ကို ရေနွေးအိတ်ကပ်ကာ ကြက်ဆူဆီအနည်းငယ်လူးပြီး နှိပ်နယ်ပေးတာက ဓမ္မတာပုံမှန်လာအောင်ကူညီပေးပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်တာက သားအိမ်ကျန်းမာရေးကိုလည်း ကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ် …။
ဓမ္မတာပုံမှန်ဖို့အတွက် အစားရှောင်ဖို့မလိုပါဘူး။ တစ်မျိုးတည်းကို များများစားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ အစားအသောက်အားလုံးကို မျှမျှတတစားပေးတာက ကျန်းမာရေးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေ ဓမ္မတာမှန်ဖို့အတွက်ပဲမဟုတ်ပါဘူး။ တခြားသော ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေအတွက်လည်း အစားရှောင်တာထက် အာဟာရမျှမျှတတစားတာက ပိုကောင်းတဲ့ နည်းလမ်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်နော် …။ ။
ဓမ်မတာမှနျဖို့အတှကျ အမြိုးသမီးတိုငျး မဖွဈမနေ သိထားသငျ့တဲ့အခကျြ (၅) ခကျြ…
ဓမ်မတာဖွဈစဉျဆိုတာ အမြိုးသမီးကနျြးမာရေးအတှကျ အရေးကွီးဆုံးအရာတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဓမ်မတာမမှနျခွငျးကွောငျ့ အမြိုးသမီးကနျြးမာရေးကို ထိခိုကျစပွေီး ရရှေညျမှာရောဂါကွီးကွီးမားမားတှကေို ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ ၂၈ ရကျတဈကွိမျဓမ်မတာလာခွငျးက ပုံမှနျဖွဈပွီး ဒီရကျအတောအတှငျးမှာမလာဘူးဆိုရငျတော့ ဒါဟာ ဓမ်မတာမမှနျဘူးလို့ ယူဆနိုငျပါတယျ။ အမြိုးသမီးကနျြးမာရေးအတှကျ အရေးကွီးတဲ့ ဓမ်မတာပုံမှနျဖို့အတှကျ ဒီအခကျြလေးတှကေို အမွဲ သတိထားပေးပါလို့ တိုကျတှနျးလိုကျရပါတယျနျော …။
ကိုယျအလေးခြိနျနညျးလှနျးခွငျး၊ မြားလှနျးခွငျးက ဟျောမုနျးတှကေိုကမောကျကမဖွဈစခွေငျးကွောငျ့ ဓမ်မတာမမှနျတာကို ဖွဈစပေါတယျ။ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့အရပျနဲ့ လိုကျဖကျတဲ့ကိုယျအလေးခြိနျရှိအောငျ အမွဲထိနျးသိမျးထားသငျ့ပါတယျ။ မိနျးကလေးတှေ လှဖို့ထကျ ကနျြးမာရေးကောငျးဖို့ ကိုယျအလေးခြိနျကို ထိနျးသငျ့ပါတယျ …။
စိတျဖိစီးမှုမြားကွောငျ့လညျး ဓမ်မတာကို အနှောကျအယှကျဖွဈစတေဲ့ဟျောမုနျးတှကေိုထှကျစတောကွောငျ့ ဓမ်မတာမှနျဖို့အတှကျ စိတျဖိစီးမှုနညျးနိုငျသမြှနညျးအောငျနသေငျ့ပါတယျ။ ကိုယျစိတျရှုပျထှေးမယျ့အရာတှေ တတျနိုငျသလောကျမတှေးဘဲနပေါ၊ အသကျရှူလကေ့ငျြ့ခနျးပွုလုပျပါ။ တရား ထိုငျပေးပါ …။
ကိုယျလကျလှုပျရှားမှုတှပေုံမှနျပွုလုပျပေးတာက ခန်ဓာကိုယျသှေးလှညျ့ပတျမှုကောငျးမှနျစပွေီး အကြိုးပွုဟျောမုနျးတှကေို ထှကျစပွေီး ဓမ်မတာမှနျအောငျလညျး ကူညီပေးနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အမြိုးသမီးတှေ ကိုယျလကျလှုပျရှားမှုတှကေို အမွဲပုံမှနျ လုပျပေးသငျ့ပါတယျ …။
ဓမ်မတာလာမယျ့ရကျကို တှကျခကျြထားပွီး ရကျနီးလာတဲ့အခါ ဝမျးဗိုကျကို ရနှေေးအိတျကပျကာ ကွကျဆူဆီအနညျးငယျလူးပွီး နှိပျနယျပေးတာက ဓမ်မတာပုံမှနျလာအောငျကူညီပေးပါတယျ။ ဒီလိုလုပျတာက သားအိမျကနျြးမာရေးကိုလညျး ကောငျးမှနျစနေိုငျပါတယျ …။
ဓမ်မတာပုံမှနျဖို့အတှကျ အစားရှောငျဖို့မလိုပါဘူး။ တဈမြိုးတညျးကို မြားမြားစားတာမြိုးမဟုတျဘဲ အစားအသောကျအားလုံးကို မြှမြှတတစားပေးတာက ကနျြးမာရေးအတှကျအကောငျးဆုံးဖွဈပါတယျ။ မိနျးကလေးတှေ ဓမ်မတာမှနျဖို့အတှကျပဲမဟုတျပါဘူး။ တခွားသော ကနျြးမာရေးအခွအေနတှေအေတှကျလညျး အစားရှောငျတာထကျ အာဟာရမြှမြှတတစားတာက ပိုကောငျးတဲ့ နညျးလမျးလညျး ဖွဈပါတယျနျော …။ ။
ကလေးမွေးပြီး(၃)ရက်မြောက်နေ့မှာ သူ့ယောကျာ်းက အတင်းအကြပ် ဆက်ဆံလို့သေဆုံးသွားတဲ့(ဖြစ်ရပ်မှန်)
အွန်လိုင်းကနေ ပုရစ်ကြော် ၀ယ်စားကြသူများ သတိထားကြပါနော်….
ခေါင်းကိုက်လို့ အိပ်ယာဝင်ခဲ့ရာမှ အဖြစ်ဆိုးနဲ့ ကြုံခဲ့ရတဲ့ (၂၁)နှစ်အရွယ် မိန်းမလှလေး..
ရှယ်ထားနော် တစ်သက်လုံးအသုံးဝင်မယ့် ဆေးနည်းပေါင်းစုံတွေ’
အရာရာကို အောင်မြင်စေသော မဟာမုနိ ကိုးဂါထာ လူတိုင်းဆောင် ထားပါ
ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်ထားတဲ့ ဘေးဒုက္ခတွေက အခုမှ စမှာတဲ့…
လက်မထပ်ခင် သင့်ချစ်သူကို မေးကြည့်သင့်တဲ့ မေးခွန်း(၁၅)ခု…
“လူတွေအမြင်မှာ အရမ်းချစ်ခဲ့ကြရဲ့သားနဲ့ ဘာလို့ပြတ်စဲမှုတွေ ဖြစ်လာရတာလဲ?”
ထပ်တူထပ်မျှ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ် မထက်ရယ် . . .
© 2020 Media Sharing.